Monday 23rd March 2020 14:07:09 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Maalmahan waxa warbaahinta iyo baraha bulshada lagu qaada dhigayay aragtida koox London
, Boqortooyada Ingiriiska kaga dhawaaqday in ay ka shaqayn doonaan midnimadii Soomaaliya oo hal-ku-dhiggoodu yahay Midnimo iyo Mar kale.
Maxamed Baashe wuxuu sheegay in madaxdii SNM aanay raalli ka ahayn gooni-isu-taagga Somaliland iyo go'aankii lagaga dhawaaqay Burco 1991 sidiisa oo kale laakiin, uu ahaa go'aan lagu degdeggay iyo caadifad dadweyne oo la soo abaabulay.
Tabliiqiga cusub ee midnimada Soomaaliweyn waxaan ku baraarujinaya masiirka ummaddu kuma xidhna dhawr siyaasi oo danaysteyaal ah balse go'aanka waxa iska leh shicibka iyo madaxda loo doortay in ay ku hoggaamiyaan rabitaankooda. Sidaa daraadeed waxay cod midaysan ku yidhaahdeen "Xasuuqii iyo mar kale maya."
Haddaba waxa la is waydiinaya mujaahidka maxaa bedelay mawqifkiisii iyo taageeradii uu u hayn jiray madax bannaanida JSL? Qofku haddii uu aamminsan yahay damaciisa iyo waxa calooshiisa galaya wax lala yaabo ma aha in maalin ba lagu arko midab iyo mawqif hor leh. Qofku wuxuu saluugi karaa arrimaha qaarkood sida ay u socdaan, waanu dhalliili karaa laakiin, kama weecin karaan haddii uu si dhab ah mabda'iisa u aamminsan yahay.
Waxa aan ku soo gabogabaynaya odhaahda tidhaahda "Geel, geel waydaartay waa geedo la'aan."
odhaah kalena waxay tidhaahda "Saca Faarso tegay saddex maalinta uu qado sandulle ayuu ku soo noqon."
[Akhriso:-] Hoos U Dhac Dhaqaale Oo Soo Wajahay Haamaha Kaydka Shiidaalka Berbera Iyo Shirkadihii Oo Goobo Kale U Wareeg
Jawigii Hargeysa Ee Saaka Oo Kale Iyo Gudo-Galkii SNM 31 May 1988
Diyaarad Kale Oo Soomaali Kasoo Celisay dibedda Oo Kasoo Degtay Muqdisho [Sawiro]
[DEG DEG:-] Guddoomiye Baashe Oo Faysal C Waraabe Siro Ka Qarxiyey + Lacago Faysal Rebay Oo Xaniban Iyo Qodobo Kale
[Daawo:-] "Somaliland Ma Dacwayn Karto Hubka Somaliya" Siyaasi Cadami Oo Ka Hadlay Hubka Soomaaliya La Siiyay